Sakafo mahazatra an'i Córdoba: Avy amin'ny salmorejo ka hatramin'ny sifotra | News Travel
La sakafo mahazatra any Cordoba Vokatry ny fitaomana roa izany. Amin'ny lafiny iray, ny Andaloziana dia avy amin'ny silamo taloha ary, etsy ankilany, ny fahatongavan'ny Kristiana avy any avaratry ny Saikinosy Iberika. Amin'ny voalohany dia tsy maintsy mampiasa be dia be izy zava-manitra toy ny oregano, solila na tarragona, raha ny fomba nentim-paharazana maro no nalaina tamin'ity farany.
ny Ny vokatry ny tany no singa fototra ao aminy. Amin'izy ireo, ny anjara asa manan-danja mitovy amin'izany no karakarain'ny oliva menaka ny sahany. Fa ny omby aman'omby eny an-tendrombohitra koa. Raha ny marina, afaka manavaka variana roa amin'ny gastronomy Cordova isika. Ny antso fahalalam-pomba Noho ny fivoarana ao amin'ireny ivon-toeram-pambolena ireny dia lasopy sy lasopy no anaovana azy. Fa kosa, ny avy any ambanivohitra Mifototra kokoa amin'ny sakafo mahavelona izy io. Raha te-hahafantatra bebe kokoa ny sakafo mahazatra an'i Córdoba ianao dia handeha hitsidika ny fomba fanamboarana malaza indrindra ao aminy.
1 Lasopy mangatsiaka, mahazatra amin'ny sakafo mahazatra an'i Córdoba
2 Stews sy fanombohana
3 hena eo an-toerana
4 Lovia hafa izay miseho amin'ny sakafo mahazatra an'i Córdoba
5 Sifotra, mahazatra amin'ny gastronomy Cordovan
6 Trondro avy amin'ny faritany afovoan-tany
7 Confectionery avy any Cordoba
8 Fisotroana miaraka amin'ny sakafo mahazatra an'i Córdoba
Lasopy mangatsiaka, mahazatra amin'ny sakafo mahazatra an'i Córdoba
Plate de ajoblanco
Ny toetrandro dia misy fiantraikany hatrany amin'ny sakafo amin'ny toerana iray. Ary i Córdoba dia tsy ho maningana. Ny andro mafana dia manasa ny fanomanana lasopy na crème mangatsiaka mamelombelona ny vatana. Noho izany antony izany, ireo karazan-tsakafo ireo dia nentim-paharazana amin'ny sakafo Cordovan.
Angamba ny kilasika lehibe indrindra amin'io heviny io dia ny salmorejo. Ny singa fototra ao anatiny dia mofo voatoto, menaka oliva, tongolo gasy, sira ary voatabia. Ny vokatra dia crème matsiro izay arosonao miaraka amin'ny shavings of ham na atody mafy. Ary koa, noho ny firafiny sy ny fomba fisotroana azy, ny manam-pahaizana dia mampiditra an'ity recipe ity ho an'ny gazpachos Andalusia.
Tsy io ihany anefa no lasopy mangatsiaka mahazatra an’i Córdoba. Toy izany koa ny Tongolo lay fotsy, izay vita amin’ny rano, tongolo gasy, sira, menaka oliva, mofo, amandy voatoto ary vinaingitra asiana sira. Toy izany koa, izy ireo dia hanompo azy miaraka amin'ny sombin-tsakafo na voaloboka. Etsy an-danin’izany, dia inoana fa mbola tranainy kokoa noho ny an’ny salmorejo ny niandohany, satria mety ho tamin’ny andron’ny Romanina sy tamin’ny sakafo grika mihitsy aza izy io.
Stews sy fanombohana
Saingy tsy ny zava-drehetra dia sakafo mangatsiaka amin'ny sakafo mahazatra ao Córdoba. Izy io koa dia manana fomba fanamboarana mamy kokoa izay ho hitanao fa matsiro. Anisan'izany, ny lasopy ny tsaramaso maina na boronia ary ny firenena paella. Ity farany dia misy, ankoatra ny vary, ny henan’omby, ny hena, ny akoho ary ny chorizo, ary ny paprika sy ny jirofo. Toy izany koa, ny lasopy hafa dia asparagus mangidy, migas ary lafarinina.
Fa ny teratany bebe kokoa dia ny vilany cordovan, lasopy chickpea vita amin'ny paprika, henan-kisoa, tongolo, tongolo gasy, sira ary laisoa. Amin'ny maha fomba fahandro mahery vaika azy, dia nomanina ho an'ny mpiasa an'andro izy io, saingy, rehefa nandeha ny fotoana, dia lasa mahazatra ny gastronomy ao amin'ny faritanin'i Andalusia.
hena eo an-toerana
Rabo de toro, sakafo mahazatra an'i Córdoba
Any amin’ny tendrombohitr’i Córdoba no tena fiompiana omby. Raha ny marina dia manana trano kely iray lehibe indrindra any Andalusia izy io ary misy omby, ondry ary osy. Tsy hahagaga anao, noho izany, fa ny hena dia iray amin'ireo singa fototra amin'ny lasopy ao amin'ny faritra.
Mikasika azy ireo dia misy lovia roa mandrafitra ny sakafo mahazatra an'i Córdoba. dia momba ny ny flamenquines ary ny rambon'ny omby. Ny voalohany koa dia manana fiomanana tena tsotra. Ireo dia henan'omby Serrano voahodidin'ny andilany ary avy eo dia nendasina sy nendasina. Amin'ny maha te hahafanta-javatra, dia hilaza aminao izahay fa ny anarana, araka ny inoana, dia avy amin'ny endrika mivelatra amin'ny endriny. Toy izany koa, ireo manam-pahaizana momba ny gastronomy dia mametraka ny niandohan'ity sakafo ity ao amin'ny tanànan'i Cordoban Bujalance, na dia niely nanerana an’i Espaina aza izany.
Amin’ny lafiny iray, sakafo mahazatra any amin’ny faritra hafa eto amintsika ihany koa ny rambon’omby. Raha ny momba azy dia efa fantatra hatramin'ny andron'ny Romanina ny fomba fanamboarana, na dia efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX aza ny fanomanana amin'izao fotoana izao. Araka ny anarany dia voaomana miaraka amin'ny rambon'omby (omby na omby) ary misy voatabia, tongolo, karaoty, dipoavatra, tongolo gasy, sira ary ravinkazo. Ampio menaka oliva sy divay mena iray vera.
Ireo sakafo roa nohazavainay taminao ireo no tena mampiavaka ny sakafo mahazatra an'i Córdoba amin'ny lafiny hena. Saingy misy hafa toy izany hen'omby miaraka amin'ny artichokes, ny lasopy bitro, la Andiana zanak'ondry na ny kisoa minono zaza. Ankasitrahana ihany koa ny chanfaina, izay vita amin’ny zanak’ondry sy ny rany, ny tongolo, ny tongolo gasy, ny raviny ary ny sakay. Saingy ity recipe ity dia an'ny hafa, miaraka amin'ny fiovaovana lakozia espaniola ary na dia ny Amerika Latina aza.
Lovia hafa izay miseho amin'ny sakafo mahazatra an'i Córdoba
Fikarohana avy any Baena
Miaraka amin'ireo fiomanana matsiro etsy ambony, dia misy fomba fanamboarana matsiro hafa mitovy amin'ny sakafo Cordovan. Ohatra, manana ny San Jose omelette, izay mampifangaro atody nokapohina miaraka amin'ny poti-mofo sy saosy safrona manokana izay manome loko mavo miavaka. Ary toy izany koa, ny Baena scramble, miaraka amin'ny tsimoka tongolo lay.
Mahafinaritra koa izany salady cordovan, mitovy amin'ny Rosiana, fa misy oliva mainty avy amin'ny tany. Ary, raha ny momba ny lovia legioma, manana ny atody nendasina miaraka amin'ny tantely ary ny Artichokes amin'ny fomba Montillana, izay voaomana amin'ny divay avy amin'ny fiantsoana Montilla-Moriles, noho izany ny anarany.
Mahaliana kokoa ny tongolo lay, antsoina koa hoe fo Cordovan, izay atao amin'ny famenoana ny anana miaraka amin'ny saosy vita amin'ny tongolo gasy nendasina, paprika, sira, vinaingitra ary tapa-kazo Serrano.
Sifotra, mahazatra amin'ny gastronomy Cordovan
Sifotra, sakafo fototra amin'ny sakafo mahazatra an'i Córdoba
Manontany tena hoe inona no mitranga amin'ny sifotra any Espaina. Raha any amin'ny faritra sasany dia zara raha lanina izy ireo, any amin'ny hafa dia heverina ho hanim-py. Anisan'ireo farany i Córdoba, izay nanova azy ireo ho zava-drehetra fanevan'ny sakafo mahavelona azy, hany ka amidy eny an-dalana mihitsy aza.
Raha ny marina dia maro ny famelabelarana novolavolaina tao an-tanànan'i Andalusia. Azonao atao ny manandrana azy ireo amin'ny karazana saosy isan-karazany. Saingy, saika ahitana vokatra toy ny voatabia, tongolo, poivre mena, tongolo gasy, divay, solila ary zava-manitra hafa izy ireo amin'ny fanomanana azy. Ary koa, ny mahazatra indrindra dia matetika ny Masiaka, na dia efa nanomboka namorona fomba fanamboarana vaovao sy mahasahy aza ny mpahandro sasany. Ohatra, sifotra fomba romanina, sautéed amin`ny vodiny, mamo amin`ny kofehy ham ary na dia carbonara.
Trondro avy amin'ny faritany afovoan-tany
Lovia misy trondro marinated
Araka ny fantatrao, tsy manana ranomasina i Córdoba, na dia misy renirano aza. Saingy tsy manakana ny trondro tsy ho eo amin'ny sasany amin'ireo fomba fanao gastronomika. Tahaka ny any amin'ny faritra hafa any Espaina, dia somary kely ihany ny rin-ran, lasopy tonelina misy ovy sy sakay. Indraindray, dia omanina miaraka amin'ny cod misy sira. Ity farany koa dia ampiasaina amin'ny fandrahoan-tsakafo ny tongolo gasy lasopy, izay miaraka amin'ny voatabia.
Na izany aza, matetika kokoa trondro marinated, indrindra fa ny palometa, izay ao Córdoba dia nomena anarana tokana hoe "japuta". Afangaro amin'ny paprika mamy, tongolo gasy, vinaingitra, oregano ary lafarinina ary endasina amin'ny menaka oliva be dia be. Fa ny marinade sy ny vinaigrette dia ampiasaina hanamboarana ireo sakafo ireo. Miaraka amin'ity farany dia be ny laniana anchovies.
Confectionery avy any Cordoba
Raha ny amin'ny tsindrin-tsakafo, dia tena isan-karazany ihany koa izy ireo amin'ny gastronomie amin'ity faritany Andalusiana ity. Misy fromazy tsara, anisan'izany ny iray avy Pedroches, izay natao tao amin'ny lohasaha mitovy anarana, efa manamorona ny Extremadura. Saingy, ambonin'ny zava-drehetra, ny confectionery dia tena zava-dehibe ao anatin'ny sakafo mahazatra an'i Córdoba.
Ny hamamian'ny sakafo Cordovane dia manambatra ireo singa Andaloziana mahazatra amin'ny fakan'ny La Mancha hafa. An'ireto farany ireto, ohatra, ny voankazo nendasina toy ny voninkazo nendasina, avy any Campo de Calatrava ary tonga hatrany Meksika sy Kolombia mihitsy aza. Eo an-toerana kosa izy ireo Aguilar meringues, ny donuts avy any Priego ary ny quince paste avy amin'ny Puente Genil.
Na izany na tsy izany, ny akora ao amin'ny confectionery Cordoban dia tantely, sesame ary matalahúva. Na izany aza, ny iray amin'ireo tsindrin-tsakafo mahazatra indrindra ao amin'ny faritanin'i Andalusia dia ny mofomamy cordovan, sakafo matsiro vita amin'ny volon'anjely sy mofomamy. Ao amin'ny dikan-teny tsirairay dia mandray ny anaran'ny mitten ary padding mitovy no mitondra ny mofomamy mofomamy shortcrust.
Farany, raha te hankafy sakafo Cordova hafa ianao dia afaka manafatra vitsivitsy Sakafo mamy. Amin'ity tranga ity, dia vita amin'ny lafarinina, siramamy, ronono, anise, voasarimakirana, menaka oliva ary kanelina.
Fisotroana miaraka amin'ny sakafo mahazatra an'i Córdoba
Divay avy any Montilla-Moriles
Tsy afaka mamita ny dianay momba ny gastronomie Cordova izahay raha tsy miresaka zava-pisotro. Efa voalazantsika teo aloha ny Anaram-boninahitra avy amin'ny divay avy amin'i Montilla-Moriles. Ao anatin'izany dia hahita divay tsara ianao.
Raha manambatra fino iray vera amin'ny dulce hafa ianao (ohatra, Pedro Ximénez), dia hanana dimampolo amby dimampolo, izay be dia be ao an-tanàna ho aperitif. Ary, mba hamaranana sakafo tsara dia afaka manafatra vera iray ianao Route brandy, izay vita amin’ny anise ary malaza eran-tany.
Ho famaranana, nasehonay anao ny akora sy ny sakafo nentim-paharazana ny sakafo mahazatra any Cordoba. Na izany aza, tsy azo atao ny manonona zava-mahagaga hafa toy ny Serrano ham avy amin'ny lohasaha Pedroches, ny Saosisy Pozoblanco, ny Pudding mainty avy amin'ny Fuenteovejuna na, eo amin'ny sehatry ny zava-maniry, ny cordovan hash, izay tsy misy afa-tsy kôkômbra, tongolo, dipoavatra, voatabia, menaka oliva, sira ary vinaingitra. Tsy te hitsidika ny tsara tarehy ve ianao Cordova ary mankafy ireo zava-mahafinaritra gastronomika ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Cordova » Sakafo mahazatra an'i Cordoba
Toerana mahafinaritra indrindra eran-tany